सीमावर्ती बजार छैन गुलजार «
सीमावर्ती बजार छैन गुलजार
नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका दुवैतर्फका सहर–बजारहरू दुवै देशका नागरिकका लागि किनमेल गर्ने मुख्य स्थल हो । नेपालीहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदारीका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने गरेका छन् भने भारतीयहरू सीमावर्ती बजारमा विदेशी सामान भारतमा भन्दा सस्तो, राम्रो पाइने भन्दै केही मात्रामा आउने गरेका छन् । तर, भारतीयको तुलनामा नेपालीहरू अधिकांश सीमावर्ती बजार भारतीय बजार पुग्ने गर्छन्, जसले गर्दा त्यही प्रकृतिका सामान बिक्री गर्दै आएका सीमावर्ती नेपाली बजारहरू फस्टाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नाका बन्द हुँदा स्वदेशी बजारमै खरिदारी गर्ने बानी परेका नेपालीहरू अब त स्वदेशी बजारमै खरिदारी गर्ने बानीमा परे कि भन्ने भान नेपाली व्यवसायीको थियो । तर, नाका खुल्ने र सहज हुनेबित्तिकै उपभोक्ताको घुइँचो सीमावर्ती भारततर्फ बढ्न थालेपछि सीमा क्षेत्रका नेपाली व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा कारोबारकर्मीहरू मीनकुमार नवोदित, लक्ष्मण ढुंगाना, मुकेश चौधरी र मनोरञ्जन शर्माले सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं व्यवसायीसँग सीमावर्ती क्षेत्रका बजार र उपभोक्ताका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
नेपाली उत्पादनलाई माया गर्नेबित्तिकै पारि जाने क्रम रोकिन्छ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, मोरङ
सीमावर्ती नेपाली बजारको समस्या भनेकै भारतीय बजार हो । यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन । पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको समस्या हो । खुला सिमानाका कारण पारि जाने क्रमलाई पूर्णरूपमा त रोक्न सकिँदैन ।
तर, भारतसँग सीमा जोडिएका सहर र बजारको व्यापार नफस्टाउनुको पछाडि भारतीय बजार नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । कोभिडको समयमा सीमा नाका बन्द हुँदा नेपाली बजारमा राम्रो व्यापार भएको थियो । यहाँका उत्पादनले बजार पनि पाएका थिए । यहाँ उत्पादित बिस्कुट, चाउचाउ, तेल, जुत्ता–चप्पललगायतका वस्तुले मागलाई धानेको थियो ।
झन्डै एक वर्षजति नै भारतबाट यी वस्तुहरू आयात भएन । आखिर यहींको उत्पादनले धान्छ भने किन विदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने ? सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता नै जागरूक हुनुपर्छ ।
स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने हो भने आयात पनि प्रतिस्थापन हुन्छ, जसले गर्दा बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्छ । यससँगै स्वदेशी व्यापार बढ्छ । राज्यको राजस्व बढ्नुका साथै रोजगारीसमेत वृद्धि हुन्छ । दुई देशबीचको व्यापारमा असमान मूल्य हुनु स्वाभाविकै हो । नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामानको मूल्य कम हुनु पनि ठीकै हो । किनभने त्यहाँका धेरै उत्पादनले राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका उत्पादनको लागत स्वाभाविक रूपमा कम पर्न जान्छ । त्यसो भएकाले नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । पारि जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन ।
रोक्ने उपाय भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार दर घटाउनुपर्छ । भन्सार दर कम पर्नेबित्तिकै त्यसको मूल्य स्वाभाविक रूपमा कम पर्छ । जस्तै चिनीको भन्सार शून्यमा झार्ने हो भने भारत र नेपालमा मूल्य खासै फरक पर्दैन । अहिले विराटनगर र जोगबनीमा चिनीको मूल्यको अन्तर करिब २५ रुपैयाँ छ । अनि उपभोक्ताले के गर्छ भने नेपालमा भन्दा धेरै नै सस्तोमा चिनी पाइन्छ भनेर जोगबनी जान्छ ।
उसले त्यहाँ पुगिसकेपछि चिनी मात्रै ल्याउँदैन । साथमा तेल, मरमसला, लत्ताकपडा, साबुनलगायतका सामान पनि ल्याउँछ । घरायसी सामान ल्याउँदा भन्सारमा पनि रोकतोक छैन, जसले गर्दा राज्यको पनि कर गुमिरहेको छ । यहाँका व्यापारीका तर्फबाट पनि उपभोक्ताबाट धेरै मूल्य लिनु हुँदैन । सीमित मार्जिन राखेर सामान बिक्री गर्नुपर्छ । हामीले विगतदेखि नै भन्सारमा होर्डिङ बोर्डहरू राखेर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अघि पनि मैले भनें, मूलभूत कुरा के हो भने नेपाली उत्पादनलाई माया गर्नेबित्तिकै पारि जाने क्रम रोकिन्छ ।
दुई वर्षयता व्यापार खस्केको छ
प्रदेश सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिम
दसैं सकिएर तिहार नजिकिएको छ । यो बेला तिहारको किनमेल बढ्नुपर्ने हो । तर, बजारमा खासै चहलपहल छैन । तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई उपहार दिनका लागि पनि लुगा, कपडा, भाँडाकुँडा किनमेल गर्ने चलन थियो । तर, यो वर्ष व्यापार त्यति राम्रो चलेको छैन । कोभिडले गर्दा दुई वर्षयता व्यापार एकदमै खस्केको छ । व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । यो बेला राज्यले पनि व्यापारीहरूलाई केही सहुलियत दिनुपर्ने थियो । बैंकको ब्याजमा पनि कुनै सहुलियत छैन । समग्रमा व्यापार सामान्य रूपमा चलिरहेको छ । राम्रोसँग व्यापार चल्न सकेको छैन ।
धनगढी सिमाना क्षेत्रको बजार हो । यहाँका ग्राहक एक किलो चिनीका लागि पनि भारतको सिमानामा रहेको बजारमा जाने गरेका छन् । एक–दुई रुपैयाँ बचाउनका लागि मानिस त्यहाँ पुग्छन् । तर, तौलमा कति घटेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । भन्सार छलीको विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । सिमानाका मानिसहरूले नेपालमै उत्पादन भएको सामान पनि भारतमै गएर किन्ने गरेको देखिन्छ । सहुलियतमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था धनगढीमै गर्न पाए राम्रो हुन्छ । भारतीयहरू नेपालमा आएर सामान किने भने हरेक कुरामा बार्गेनिङ गर्छन्, तर नेपालीको बार्गेनिङ गर्ने चलन छैन । जति भन्यो त्यही पैसा तिरेर सामान किन्ने गरेका छन् ।
नेपाली व्यापारीले कुनै खाद्यमा मिसावट गरेको छ भने खाद्य गुणस्तर कार्यालय हेर्नुपर्छ, तर नेपाली व्यापारीले त्यस्तो बदमासी गरेका छैनन् । चाडबाड आएपछि मात्रै अनुगमन हुने, अरू समयमा अनुगमन नहुने देखिएको छ । कति डेट एक्स्पायर सामानहरू पनि बिक्री गरिरहेका हुन्छन् ? प्रिन्ट रेटभन्दा कति माथि गएका छन् ? भन्ने कुरा हेर्न अनुगमन टोली हुनुपर्छ । तर, यो टोली चाडबाडमा मात्रै सक्रिय देखिन्छ । अरू बेला पनि यसैगरी अनुगमन हुनुपर्छ । कतिपय पसल दर्ता नभएर पनि खोलिएका छन् । यसले गर्दा दर्ता भएका पसलहरू मारमा परेका छन् । यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ । साथ चाहिएमा उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सहयोग गर्छ ।
पछिल्लो समयमा अनावश्यक झिलिमिली गर्ने चलन बढेको छ । भारतीय संस्कृति भिœयाएर यस्तो गरिएको छ । हाम्रा बुबाहरूको पालोमा सालको पातमा बत्ती काटेर बत्ती बाल्ने गरिएको थियो । दिदीबहिनीले तिहारको बेला लुगाफाटा वा काँसको थाल उपहार दिने चलन छ । खास गरेर टोपी र टीका गाँसियोस् भन्ने हो । जे भए पनि तिहार सामान्य तरिकाले मनाउनुपर्छ ।
चाडबाडको बेला व्यापारीले महँगी बढाए भन्ने कुरा गलत हो । खाद्यान्नको भाउ पहिलेदेखि नै बढेको छ । तेलको भाउ अलिकति बढेको हो । कपडाको मूल्य केही बढेको छ । तर, यसलाई महँगी बढेको कसरी भन्ने ? यत्रो समयदेखि व्यवसाय चलेको छैन । भाडा मिनाहा भएको छैन । व्यापारीले भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकको ब्याज बढिरहेको छ । महँगी नै बढाउने भनेर भाउ बढाएको छैन । सामानको मूल्य नै बढेर आएपछि व्यापारीहरूले पनि सोहीअनुसार सामान बेचेका छन् ।
कोरोनाका कारण थला परेको नेपालगन्जको व्यापारमा सुधार आएन
महासचिव, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
कोरोनाका कारण दुई वर्षदेखि थला परेको नेपालगन्जको व्यापारमा संक्रमण घटेसँगै सुधार हुने अपेक्षा यहाँका व्यवसायीहरूले गरेका थिए । दसैं नजिकिएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण दर पनि घट्यो । लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत सिमानाका खुल्यो । नाका खुलेसँगै सीमापारिको बजार रुपैडिहामा उपभोक्ताको भीड लागेको छ । दैनिक ४ देखि ५ हजार जना किनमेलका लागि त्यहाँ जाने गरेका छन । दसैंतिहारको समयमा भ्याइनभ्याइ हुने यहाँका व्यवसायी फुर्सदिला भएका छन ।
दसैंतिहारको समयमा यतिबेला नेपालगन्जको घरबारी टोल, सदरलाइन, त्रिभुवन चोक, न्युरोडलगायतका क्षेत्रहरूमा विगत वर्षहरूमा सामान किनमेल गर्नेहरूको ठूलो भीड लाग्ने गथ्र्यो । कोरोनाका कारण लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी हुँदा दुई वर्षदेखि ठप्प भएको यहाँको व्यापार यति बेला पनि नहुँदा व्यवसायीहरू निराश बनेका छन् । उता सीमापारिको भारतीय बजार रुपैडिहामा भने नेपाली उपभोक्ताहरूको ठेलमठेल घुइँचो छ । हामीले उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाट उपभोक्ता जागरुक बनाउनका लागि पहल थाले पनि खासगरी सरकारी तवरबाट त्यो किसिमको सहयोग भएको पाइँदैन ।
सीमापारि भइरहेको व्यापारलाई निरुत्साहित गरी नेपाली बजारमा उपभोक्ता आकर्षित गर्ने सरकारी योजना नहुँदा नेपाली व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले सहुलियत पसलका नाममा कागजी रूपमा नुन र चामलमात्र राखेको छ । सबै खाले उपभोग्य वस्तुमा छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल खोल्नुपर्नेमा उपभोक्ता आकर्षित गर्ने सरकारी योजना नहुँदा सीमापारिको व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा यहाँका व्यवसायी परेका छन । रुपैडिहामा सामान किन्न जाने नाममा दैनिक अवैध रूपमा तस्करी हुँदा पनि तस्करी नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न नसक्नुका साथै उपभोक्ताको आकर्षण बढाउनेतर्फ खासै चासो नदिएकाले दसैंतिहारको बेलामा समेत नेपालगन्जको व्यवसायले गति लिन नसकेको हो । स्वदेशी उत्पादन प्रर्वद्धन, भन्सार नियमनमा कडाइ र चाडबाडको बेलामा सहुलियत दिने राज्यको नीति नाममात्रको छ, जसका कारण उपभोक्ता स्वदेशी व्यवसायप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको प्रभाव मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ ।
सरकारले सीमापारिको व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित गरी उपभोक्तालाई स्वदेशमै आकर्षित बनाउन समय–समयमा बजार अनुगमनका साथै विशेष योजनाका साथ कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संक्षिप्त प्रज्ञापनमा कडाइ गर्नुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही
निश्चय पनि नेपाल–भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका बजारहरूमा दुवै देशका नागरिकहरूको आकर्षण नै रहने गरेको छ । भारतमा नेपालभन्दा सस्तो र नेपालमा विदेशी सामान गुणस्तरीय सामान भारतमा भन्दा सस्तो पाइने भन्दै उपभोक्ताहरू वारिपारि आएर गएर खरिदारी गर्ने गरेका छन् । यसरी खरिदारी गर्दा स्थानीय व्यवसाय बजार गुलजार दुवैतर्फ हुनुपर्ने हो, तर सीमावर्ती भारतीय बजार गुलजार हुँदा नेपाली सीमावर्ती बजारमा चहलपहल खासै हुँदैन । यो पहिलेदेखि नै थियो र अझै पनि उपभोक्ता सचेत हुन सकेका छैनन् ।
कोरोनाका कारण सीमा नाका र सीमावर्ती बजारहरू बन्द हुँदा स्थानीय बजारमा खरिदारी गर्ने बानी नेपालीहरूमा परेको थियो र केही मात्रामा स्थानीय बजारहरूमा चहलपहल बढेको थियो । सीमा नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारहरू केही मात्रामा चलायमान देखिएका थिए । तर, पछि नाका पूर्णरूपमा खुल्न थालेपछि नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारतर्फ बढिरहेका छन् । कसैले रोक्न सकेका छैनन् ।
अहिले चाडपर्वको समयमा सीमा नाका खुल्दा भारतीय बजार पूरै उत्साहमा छन् भने नेपाली बजारहरूमा त्यस्तो कुनै रौनक देखिएको छैन ।
सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात् नाका खुल्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र भने विस्तारै चलायमान हुँदै छ, भारतीयहरू आउने क्रम विस्तारै सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।
नेपाली उपभोक्ताहरू सामान सस्तो पाइने भन्दै सीमावर्ती भारतीय बजार पुग्ने गर्छन् । तर, नेपाली उपभोक्ताहरूले कहिले पनि सामानको गुणस्तर, मूल्यमा तुलना गरेको पाइँदैन । एकाध सामान भारतमा सस्तो होला, तर धेरै भारतीय सामान जसको भारतमा जति मूल्य छ त्यति मूल्यमै नेपालमा पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यसतर्फ नेपाली उपभोक्ताको ध्यान कहिल्यै जान सकेन । अर्को कुरा, सरकारले खरिदारी गर्ने जुन छुट लिमिट दिएको छ, त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । १ हजार रुपैयाँसम्मको सामान खरिदारी गरेर आउने छुट भए पनि उपभोक्ताले लाखांै रुपैयाँका विभिन्न सामानहरू खरिदारी गरिआएको पाइन्छ ।
यो विषयमा भन्सार कार्यालय पनि अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुप¥यो । चोरी–निकासी पनि नियन्त्रण हुनुप¥यो । हुन त प्रहरीकोे सक्रियता बढेको छ । नियन्त्रणमा अझ बढी प्रभावकारिता देखिनुपर्छ । झोलेपोके तस्कर जो नाका हुँदै आउने गर्छन्, खरिदारी गरी त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ताले ल्याएर दिएका सामान कुनै पनि व्यवसायीले खरिद गर्नु हुँदैन ।
त्यसो गरेमा केही मात्रामा भए पनि मद्दत पुग्छ । भारतमा सस्तो सामान पाइन्छ भन्दैमा कर नतिरी हजारौंको सामान ल्याउनेहरूलाई करको दायरामा नल्याएसम्म यो परिपाटी जारी रहन्छ र नेपाली सीमावर्ती बजारहरू चलायमान बन्न सक्दैनन् । घरायसी सामानका नाममा दैनिक करोडौंका सामान भन्सार नगरी भित्रिने भएकाले दिनहुँ भारतमा खरिदारीका लागि जानेहरूको रेकर्ड नाकामा राख्नुपर्ने साथै संक्षिप्त प्रज्ञापन अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी आउने–जाने सबैलाई र ल्याएका सामानहरूको स्क्यान गर्ने मेसिन जुन जडान छ, त्यसको प्रयोग गरिनुपर्छ ।
भन्सार नीति परिवर्तन हुनुपर्छ
प्रोप्राइटर, गौचन फेन्सी पसल, भैरहवा
एकादेशमा सीमावर्ती बजारहरू गुलजार थिए । दैनिक हजारौंको व्यापार हुने गथ्र्याे । मानिसहरू टाढाटाढाबाट लत्ताकपडा, दैनिक खाद्यवस्तु खरिद गर्न भैरहवा आउने गर्थे । तर, अहिले माहोल धेरै परिवर्तन भएको छ ।
२०४५ सालमा जब व्यापार तथा पारवहन सन्धि भारतले नेपालसँग नवीकरण गरेन र नाकाबन्दी ग¥यो त्यति बेलादेखि नेपालीहरू सीमावर्ती बजारमा खरिदारीका लागि जान थालेका हुन् । हाम्रो भैरहवाको कुरा हो यो २०४५mबष्तियस्।२०४५द्दछ सालअघिसम्म भैरहवाको बजार एकदम गुलजार थियो । त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरू भारतीय बजार जाने क्रम विस्तारै बढ्दै गयो ।
नेपाली उपभोक्ताको चहलपहल भारतीय बजारमा बढेपछि नौतनवा होइन सुनौलीमा अझ बढी चहलपहल हुन थाल्यो । जुन क्रम अहिले पनि छ । पारिको बजारमा चहलपहल हुँदा हामीकहाँ व्यापार छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कोरोनाको समयमा नाका बन्द हुँदा उपभोक्ताहरूमा स्थानीय बजारमा खरिदारी गर्ने प्रचलन परेको थियो । केही मात्रामा भए पनि बजारहरू गुलजार हँुदै गएका थिए । अब नेपाली उपभोक्ताले नेपाली बजारमै खरिदारी गर्ने क्रम सुरु भयो भनी हामी निकै खुसी भएका थियौं । तर, त्यो क्रम धेरै टिकेन ।
नेपाली बजारमा खरिदारी गर्ने नेपाली उपभोक्ताको बानी रहन गयो होला भन्ने सोचाइ व्यर्थको रहेछ । दसैंअगाडि असोज पहिलो साताबाट नाका खुल्यो । नाका खुलेपछि नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो भारतीय बजारतिर बढेको छ । हामी उपभोक्तालाई रोक्न सक्दैनौं । स्थानीय बजार प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा सरकारको स्थानीय तहको हो । तर, यस विषयमा कसैलाई केही मतलब छैन ।
हामी कराएर मात्र केही हुनेवाला छैन । जबसम्म भन्सारमा नीति परिवर्तन हुँदैन तबसम्म सीमावर्ती बजारमा खरिदारीका लागि जानेहरूलाई रोक्न सकिँदैन । अन्डर बिलिङ, असमान भन्सार मूल्यांकनलगायतका कारणले भारतीय केही सामानहरू जस्तो कुर्था–सुरुवाल, धोती, कपडालगायतका सामान भारतको तुलनामा नेपालमा महँगो पर्छ । कुनै–कुनै सामानको त भन्सार मूल्यांकन र कपडाको मूल्यभन्दा महँगा छन्, जसले गर्दा यहाँ सामान महँगो छ ।
त्यही सामान नेपाली उपभोक्ताले भारतबाट भन्सार नतिरी ल्याउँछन् र नेपालमा त धेरै ठग्ने, भारतमै कति हो कति सस्तो भन्छन् । त्यसैले गर्दा भन्सार मूल्यांकन, अन्डर बिलिङजस्ता कारण र अरू पनि छन् । संक्षिप्त प्रज्ञापनमा कडाइ गर्नुपर्छ । भन्सार बिन्दुमै जुन १ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउन छुट छ, त्योभन्दा बढी ल्याउनेलाई प्रज्ञापन भराई भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ र कडाइ पनि गर्नु पर्छ ।
नेपाली बजार गुलजार बनाउने मुख्य दायित्व सरकारको हो र यसमा भन्सारको मुख्य जिम्मेवारी पनि छ ।
संक्षिप्त प्रज्ञापनलगायतका विषयमा भन्सार अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा राजस्व संकलनसमेत अलि राम्रो हुने थियो र भन्सार कर तिनुपर्छ, भन्सारमा कडाइ छ भनेपछि उपभोक्ताहरू पनि नेपाली बजारमै खरिदारी गर्न सक्थे ।
अर्को कुरा, झोलेपोकेका कारण पनि समस्या छ । झोलेपोकेका सामान भैरहवा, बुटवल मात्र नभई पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसम्म पुग्ने गरेको छ । झोलेपोकेको सामान कसैले खरिद नगर्ने र सामान ल्याउन अर्डर पनि नगर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुने थियो । यो विषयमा उद्योगी–व्यवसायीका निजी संस्थाहरू अलि गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
उपभोक्ता सचेत हुन सकेनन्
अनिल ज्ञवाली, अध्यक्ष, उद्योग व्यापार संगठन, रुपन्देही
अहिले मुख्य समस्या भनेकै हाम्रो उपभोक्ताले कुरा नबुझ्नु हो । हामीले लामो समयदेखि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय बजारमा खरिदारी गरौं, नेपाली हुनुमा गर्व गरौं भन्दै आएका छौं । जति भने पनि उपभोक्ताको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन । हामीले हरेकपल्ट आयोजना गर्ने व्यापार मेलाहरूमा एकै प्रकृतिका सामानको नेपाली बजारमा पर्ने मूल्य र भारतीय बजारमा पर्ने मूल्यका बारेमा पोस्टर राखेर जनचेतना जगाउँदै आएका छौं । विभिन्न कार्यक्रममा यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरेका छौं । तर, उपभोक्ता सचेत नहुँदा धेरै समस्या छ । सस्तोको नाममा गुणस्तरहीन सामानहरू आउने गरेका छन् । उपभोक्ताले मूल्य पनि हेर्दैनन् । चिनी र कपडा हो अलिकति सस्तो पर्ने । तर, तीबाहेक धेरै सामान नेपालमै सस्तो हुन्छ । यसतर्फ उपभोक्ताको ध्यान कहिल्यै पनि जान सकेन ।
आम नेपाली उपभोक्ताकै कारण नेपाली बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सीमा नाकामा कडाइ नहुँदा, भन्सार खरो रूपमा प्रस्तुत नहुँदा, संक्षिप्त प्रज्ञापनमा फितलो हुँदा र प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति कमजोर हुँदा पारिको बजारमा चहलपहल र नेपालको बजारमा आकर्षण कम हुने गरेको हो । नेपाली बजारमा जुन डेढ–दुई दशकअघि चमक थियो त्यो अब आउन सक्ने देखिन्न । नेपाली उपभोक्तामा चेतनाको अभावले, कर तिरेर, भन्सार तिरेर सामान ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना आउन नसक्दा सामान्य अधिकारको दुरुपयोग गरी लाखौंको सामान धमाधम भित्रिरहेका छन् । घरायसी प्रयोगका नाममा सामान ल्याउने र ती सामानलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएको छ । यस्ता कार्यहरू रोकिनुपर्छ ।